တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ Windows ကို Install လုပ်ခြင်းအကြောင်း 15 ဘုံမေးခွန်းများ
Windows ကို Installing & အဆင့်မြှင့်
by တိ Fisher က
Windows ကို 10, 8, 7, Vista, & XP ကို ​​install လုပ်ခြင်းအကြောင်းမေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းစာ၌ရေးထားတော့လဲ tutorial ၏ပိုပြီးလူကြိုက်များစုံတစျခုက Windows ကို install ဘို့ငါတို့ဗျူဟာလမ်းညွှန်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အဘို့အဦးတည်းရှိ Windows 8 ကို , Windows7ကို များနှင့် Windows XP ကို (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘို့တယောက်အလုပ်လုပ်နေ Windows 10 ကို ) ။
သူတို့အားလဲ tutorial မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, installation နဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော် get ပိုဘုံသူတွေကိုအချို့ကိုဖြစ်ကြောင်းအံ့ဩစရာမရှိရှိပါတယ်။
အောက်တွင်အဲဒီမေးခွန်းတွေအချို့အဖြေများကိုဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကပိုမေး add & တစ်ဦးရဲ့အဖြစ်အချိန်ပေါ်တတ်ပေမယ့်သင်တစ်ခုခုကဒီမှာဖြေရှင်းရပါမည်ထင်လျှင်ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့, ဒါမှမဟုတ်အထဲကစစျဆေးဖို့အခမဲ့ခံစားရပါလိမ့်မယ် GET ပိုအကူအညီ သင်တို့သည်ဤမှတဆင့်ဖတ်ပါတော့ပေမယ့်နေဆဲဒုက္ခရှိခြင်းလျှင်။
& # 34; ငါ & # 39 လုပျဆောငျသငျ့ကွောငျးကိုဖတ်ရှု; စင်ကြယ်သော & # 39; Windows ကို install လုပ်ပါ။ ငါကဘယ်လိုပြုကြသနည်း ? ငါအထူး disc ကိုသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက် & # 34 လိုအပ်သလား,
အခြေခံအားဖြင့်စင်ကြယ်သည့်ဖျောက်ဖျက်ဖို့နည်းလမ်း install drive ကို တည်ဆဲနှင့်အတူ operating system ကို Windows မှာ install လုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းပေါ်မှာ။ ဒါက "သစ်" ကို install (တစ်ဦးတစ်ဦးအချည်းနှီးသော drive ပေါ်တွင် install) အဖြစ်အနည်းငယ်အပိုခြေလှမ်းများနှင့်အတူ, (ယခင် Windows ဗားရှင်းကနေ "ရွေ့လျား") အနေနဲ့အဆင့်မြှင့်တပ်ဆင်ခြင်းထံမှမတူနှင့်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောအရာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် install စင်ကြယ်နီးပါးအမြဲ Windows ကို install လုပ်ဖို့ပိုကောင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ install တစ်ဦးကစင်ကြယ်သောကြောင့်နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှ, ဆော့ဖ်ဝဲဖောင်း, ဒါမှမဟုတ်သင်၏ယခင် installation ကိုနှောငျ့ကြစေခြင်းငှါအခြားကိစ္စရပ်များဆောင်ကြဉ်းမည်မဟုတ်။
အဘယ်သူမျှမကသင်သည်အထူးကို Windows disc ကို, ဒါမှမဟုတ် install စင်ကြယ်လုပ်ဖို့တခြားဆော့ဗ်ဝဲသို့မဟုတ် tools တွေကိုမဆိုမျိုးမလိုအပ်ပါ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်ဖယ်ရှားပစ်ဖြစ်ပါတယ် partition ကို (s) ကို သင်က Windows installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတွက်ခြေလှမ်းရသည့်အခါသင့်လက်ရှိ operating system ကိုမဆံ့သော။
Windows 10 ကို Install ကိုရှင်းလင်းနည်း [ယခုတှငျအလုပျလုပျ]
Windows 8 ကို Install ကိုရှင်းလင်းနည်း
Windows7ကို Install ကိုရှင်းလင်းနည်း
Windows XP ကို Install ကိုရှင်းလင်းနည်း
သူတို့အားလဲ tutorial အားလုံးသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏ 100% ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်လမ်းတိုင်းခြေလှမ်းဘို့ screenshots များပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီဗျူဟာလမ်းညွှန် OS ကိုအသီးအသီးကိုအဓိကဗားရှင်းတိုင်းလေ့ရရှိနိုင်ထုတ်ဝေသို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ဗားရှင်းကိုဖုံးလွှမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြပါ။
& # 34; ငါ & # 39 ရတယ်; မှားနေသော product key ကို & # 39; တစ်ဦး & # 39 နှင့်အတူသတင်းစကား; Code ကို: 0xC004F061 & # 39; အမှား! အဘယ်အရာကို & # 39; မှားယွင်းတဲ့့ & # 34;
ဤတွင်အားလုံးအနေနဲ့မှားနေသော product key ကိုပြတင်းပေါက်အထဲမှာအပြည့်အဝ error message ကို, ဖွင့်:
Code ကို: 0xC004F061 ဖော်ပြချက်: ဝန်ဆောင်မှုလိုင်စင်အဆိုပါ Software ကိုဒီသတ်မှတ်ထားသော product key ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဘို့မဟုတ်, စင်ကြယ်သောတပ်ဆင်ဘို့ကိုသာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုဆုံးဖြတ်သည်အဆိုပါ product key ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ကိုအောက်ပါပျက်ကွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ 0xC004F061 အမှားကို Windows စဉ်အတွင်းပေါ်လာသော activation က) သင်တစ်ဦးသည် Windows အဆင့်မြှင့်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်ကို product key ကို သင်မူကား, installed clean အခါသင်ခ) drive ပေါ်တွင် Windows ကိုမိတ္တူရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ပြတင်းပေါက်၏အောက်ဆုံးမှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုသငျသညျသနျ့ရှငျးနတပ်ဆင်ဘို့ဤ product key ကိုမသုံးနိုငျကွောငျးဖျောပွထားပေမယ့်လုံးဝမမှန်ပါဘူး။ တစ်ဦးက Windows ကိုစင်ကြယ်သော install ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ကြိုတင်စင်ကြယ်တပ်ဆင်ရန်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows ကိုအဆင့်မြှင့်-ခိုင်လုံသောဗားရှင်းခဲ့ကြရပေမည်။
ဤပြဿနာကိုရန် Microsoft က-supported ဖြေရှင်းချက် Windows ကိုယခင်ဗားရှင်း reinstall ပြီးတော့ Windows ကို install ရှင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အခြားဖြေရှင်းချက်ကို Windows ၏တူညီသောဗားရှင်းကို Windows တစ်ခု In-ရာအရပျအဆင့်မြှင့်ပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ထူးဆန်းတဲ့ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်တော်တော်များများသတင်းရပ်ကွက်အရသိရသည်သင်ဖြစ်စဉ်ကိုပြီးဆုံးပြီးနောက်အောင်မြင်စွာက Windows ကိုသက်ဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့အားဖြေရှင်းချက်မလုပ်မလုပ်လျှင်, သင်တစ်ဦးသည် Windows System ကို Builder disc ကိုဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် (တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦး OEM disc ကိုအဖြစ်ရည်ညွှန်း) သင်တစ်ဦးအချည်းနှီးသော hard drive ကိုအပေါ်ကို install သို့မဟုတ် non-upgrade-တရားဝင် version ကိုကျော် install ရှင်းလင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့် Windows ကို (ဥပမာစသည်တို့ကိုကို Windows 98,) သို့မဟုတ် non-ကို Windows operating system ကို။
ဒါဟာအတွင်း Windows ကိုသန့်ရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို install လုပ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်, သင်သည်သင်၏ product key ကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာ, သင်မှား key ကိုသုံးနေကြောင်းဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိပေးခဲ့သည်ကြသည်မဟုတ်: သတိပြုပါ။ Windows အ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတွက်စင်မြင့်မယ့်သူကသင့်ရဲ့တိကျတဲ့အခွအေနေအဘို့အတရားဝင်ဖွင့်မရလျှင်, product key ကိုမှာအားလုံးတရားဝင်သည်ဆိုပါကကြည့်ဖို့ check လုပ်ပေးပါတယ်။ Windows ကိုလုံးဝထည့်သွင်းပြီးနောက်အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ activation လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သင်ပိုမို product key ကိုသီးခြားမေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့မြင် Windows ကိုကုန်ပစ္စည်းသော့ချက်များမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ပိုပြီးအကူအညီစာမျက်နှာကို။
& # 34; ငါ DVD ကိုအပေါ်ကို Windows ရှိပေမယ့်ကျွန်မ flash drive ကိုပေါ်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ပေး & # 34 ပါသလဲ;
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဒီတော့တချို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားလဲ tutorial လိုအပ်သည်ကအသံမယ်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်:
တစ်ဦးက USB Device ကို မှစ. Windows 8 ကို Install လုပ်နည်း
တစ်ဦးက USB Device ကို မှစ. Windows7ကို Install လုပ်နည်း
ကံမကောင်းစွာပဲတစ်ဦးအချည်းနှီးသောရန်သင်၏ Windows installation ကို disc ကိုကနေဖိုင်တွေကိုကူးယူ flash drive ကို ပြုကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
& # 34; ငါက Windows ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေမယ့်ငါအားလုံးတစ်ဦးက ISO ဖိုင်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါတစ် DVD ဒါမှမဟုတ် flash drive ကိုအပေါ်ဒီတော့ငါကတကယ်တော့ Windows ကို install လုပ်နိုင်မရ & # 34 ပါသလဲ;
အဲဒီ ISO ဖိုင်ကို သင်ရှိသည်သပ်သပ်ရပ်ရပ်တဖိုင်အထုပ်တွင်ပါရှိသောတစ်ဦးကို Windows installation ကို disc ကိုတစ်စုံလင်သောပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, သငျရုံ disc ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် flash drive ကိုမှ file ကို copy နဲ့ Windows ကို install လုပ်ဖို့ကြောင့်သုံးစွဲဖို့မျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး။
သင်တစ်ဦး DVD မှ Windows ကို install လုပ်ဖို့လိုပါလျှင်တွေ့ မယ့်ဒီဗီဒီတစ်ခုက ISO File ကို Burn ဖို့ဘယ်လို ညွှန်ကြားချက်သည်။
သင်တစ်ဦးကို flash drive ကနေ Windows ကို install လုပ်ချင်လျှင်, သင်ကျနော်တို့ကနောက်ဆုံးမေးခွန်းအတွက်ချိတ်ဆက်တူလဲ tutorial ၏တဦးတည်းကိုလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
& # 34; ငါသည်ငါ့ကို PC ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ Windows ကိုရှိသည်။ ငါသည်အခြားအတူ PC ကိုအစားထိုးရန်လျှင်, ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါအရင်ဦးတည်း & # 34 ကနေဖယ်ရှားပစ်သကဲ့သို့ငါ၏သစ်ကို PC မှာ Windows ကငါ့မိတ္တူကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်;
ဟုတ်ပါတယ်။ သငျသညျသစ်ကိုတဦးတည်းပေါ်မှာကိုသက်ဝင်မီအဟောင်းကွန်ပျူတာကနေ Windows ကိုဖယ်ရှားပစ်ရမယ်: အဆိုပါအကြီးမားဆုံးအချက်သင်သည်ဖော်ပြထားသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သာအချိန်ကို Windows တဦးတည်းကွန်ပျူတာပေါ်မှာ run နေသင့်ရဲ့မိတ္တူရှိနိုင်ပါသည်။
စိတျထဲမှာထားရန်နောက်ထပ်အရာသင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows ကိုမိတ္တူလိုင်စင်ရ, ပြီးတော့အခြားကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးလို, တူညီတဲ့ "စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို upgrade" apply အဆင့်မြှင့် installed လျှင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ: သင်က Windows ပေါ်မှာတစ်ယခင်ဗားရှင်းရှိသည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်မထည့်သွင်းမီကွန်ပျူတာ။
အရေးကြီး: ကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင့်တပ်ဆင်ပြီးလာလျှင်သင်ကအခြားကွန်ပျူတာကို Windows "ရွှေ့" လို့မရပါဘူး။ Windows ကိုသင့်ရဲ့မိတ္တူ OEM သင်သာကြောင့်ပြီးသားပေါ်မှာ install လုပ်ထားလာသောကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ဆိုလိုတာကလိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်။
& # 34; ငါသည်ဘယ်နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်အခြားကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows ကို reinstall နိုင်မလဲ? ငါ & # 39 ကိုလိုက်နာယူဆ; ဟောင်းတပ်ဆင် & # 39 uninstall; ? စိုးမိုးရေး, ငါသည် # 34 & ကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Windows ကို install လုပ်ပါထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်;
ဤမျှကာလပတ်လုံးငါသည်နောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာဆှေးနှေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုကျနာအဖြစ်ပေါ်သို့သငျသညျကို Windows ကို reinstall ကွန်ပျူတာများ၏အရေအတွက်မျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
& # 34;? Do ငါအခြားကွန်ပျူတာ & # 34 ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ် install လုပ်လိုလျှင် Windows ကိုအခြားမိတ္တူကိုဝယ်ခြင်းငှါရှိသည် ဖြစ်. ,
ဤအဖြေကိုသင်နောက်ဆုံးအနည်းငယ်အဖြေတွေကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုပါကဖြစ်ကောင်းရှင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်: ဟုတ်ကဲ့, သင်ကအပေါ်ကို အသုံးပြု. အပေါ်စီစဉ်ထားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိုင်းကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ Windows ကို install လုပ်မယ့်လိုင်စင်ကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
& # 34; ငါသည်ငါ့ကွန်ပျူတာက Windows ကို DVD / flash drive ကိုအတူပြန်လည်စတင်ပေမယ့် Windows ရဲ့ setup ကိုအစီအစဉ်ကို didn & # 39; t ကိုစတင်ဖို့။ ဘယျ # 34 & ဖြစ်ပျက်;
အခွင့်အလမ်းတွေကိုသည့်ထိုကောင်းမွန်သောဖြစ်ကြသည် င်ပြီး boot order ထဲမှာ BIOS ကို သို့မဟုတ် UEFI စနစ်တကျသင့်ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်ဖို့မပြုပြင် optical drive ကို သို့မဟုတ် USB အ ဘို့ဆိပ်ကမ်းများ bootable က hard drive ကိုအထဲကတူညီတဲ့အဘို့အ check လုပ်ပေးပါတယ်မတိုင်မီမီဒီယာ။
ကြည့်ရှုပါ BIOS ကိုသို့မဟုတ် UEFI အတွက် Boot ကိုအမိန့်ကိုပြောင်းလဲနည်း အကူအညီတောင်း။
& # 34; ကူညီပါ! အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာကို install Windows အနေစဉ်အတွင်းတစ် BSOD တယ် / ပြန်လည်စတင် / froze & # 34;
နောက်တဖန် Windows ကို install လုပ်ပါကြိုးစားပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးကို Windows installation ကိုစဉ်အတွင်းပြဿနာများကိုယာယီရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အခြားရိုက်ချက်ကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို install စင်ကြယ်လုပ်နေတာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုထပ်ကျော်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါ။ install စင်ကြယ်၏အစိတ်အပိုင်းကတည်းကကပါဝင်ပတ်သက် ပုံစံ ကဒီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတပ်ဆင်ခလွန်ပါစေနှင့်အတူတည်ရှိစေခြင်းငှါ, ဘာပဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, drive ကို။
ရုံကို Windows စတင်ပါလျှင်နောက်တဖန်အကျော် install အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, မည်သည့်မလိုအပ်သော unplugging / မဖယ်ရှားကြိုးစားကြ ဟာ့ဒ်ဝဲ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရှေ့၌သင်တို့ကွန်ပျူတာကနေ။ ကဟာ့ဒ်ဝဲအချို့ကိုအပိုင်းအစကို install အနေနဲ့ပြဿနာရှိခြင်းရဲ့လျှင် Windows ကို setup လုပ်ငန်းစဉ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး။ Windows ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့် running ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကဒါဟာဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးတပ်ဆင်ခပြဿနာ troubleshoot ဖို့အများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကွန်ပျူတာ BIOS သို့မဟုတ် UEFI updated ကြောင်းသေချာပါစေ။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဤ updates များကို Motherboard က Windows မှာကဲ့သို့အလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူမကြာခဏမှန်ကန်သော compatibility ကိစ္စများ။
& # 34;? ဘယ်လို Windows ကိုပြီးသား # 34 & ငါ၏အဖုန်းနံပါတ်သိကြပေ;
သငျသညျကို Windows အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်တစ်ဦးအတွက် Microsoft အကောင့်ကိုသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်ပါကအချို့သော Windows ကို setup ကိုဖြစ်စဉ်များရဲ့အဆုံးအနီး, သင်သည်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်များကိုသို့မဟုတ်အတည်ပြုရန်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြီးသားစာရင်းသည်ဆိုပါကပဲသင့်ကို Microsoft အကောင့်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါသင်ယခင်က Microsoft ကကထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဆိုလိုသည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲအတိတ်တွင်အခြား Microsoft ကဝန်ဆောင်မှုအတွက် logged င့်လျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးကို Microsoft အကောင့်ရှိသည်။
& # 34; ကို Windows ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နီးပါး $ 200 အမေရိကန်ဒေါ်လာကုန်ကျ ?! sa download နဲ့မဘောငျမိတ္တူ & # 34; ငါအဲဒါကို & # 39 ကတည်းကစျေးချိုလိုထင်!;
သင်တို့အဘို့အပေးဆောင်နေအရာကိုအများစုဒါကြောင့်များများက၏-အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း-သို့မဟုတ်အမြန် turnaround ရှုထောင့်ကနေဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်ရှုထောငျ့မှအကျိုးရှိသည်မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်, Window သုံးစွဲဖို့လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်။
& # 34;? အခမဲ့ & # 34 ကို Windows 8.1 သည် Windows 8 ကနေအဆင့်မြှင့်သည်,
ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုပြီးသား Windows 8 ကိုအပြေးလျှင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့, သင်သည် Windows Store မှ Windows 8.1 အခမဲ့ update ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
& # 34;? Windows 8.1 ကို Update ကိုအခမဲ့ & # 34 ကို Windows 8.1 ကနေအဆင့်မြှင့်သည်,
တနည်းကား, ဟုတ်ကဲ့။ ဒါက update ကိုလည်းအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြည့်ပါ က Windows 8.1 ကို Update ကို Windows ကိုမှ 8.1 Update ကိုအဆင့်မြှင့်အပေါ်ပိုပြီးအဘို့အပိုင်းအစ။
& # 34;? အခမဲ့ & # 34 အဓိက Windows 10 ကိုအဆင့်မြှင့်တင် Are;
သို့သျောလညျးကိုတဖန်, ဟုတ်ကဲ့။ အားလုံး Windows 10 ကို updates များကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
& # 34;? ငါက Windows 8 (စံ) မှ Pro ကိုက Windows 8.1 & # 34 ကို update နိုင်သလား;
အဘယ်သူမျှမမဟုတ်ဘဲတိုက်ရိုက်။ သငျသညျကို Windows 8 ရှိသည်နှင့် 8.1 update ကိုလျှောက်ထားလျှင်, သင်က Windows 8.1 ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကို Windows 8 Pro ကိုရှိသည်နှင့်ပု 8.1 update ကိုလျှောက်ထားလျှင်, သင်သည် Windows 8.1 Pro ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ အလားတူယုတ္တိဗေဒကို Windows 8.1 Update ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
သငျသညျစံထုတ်ဝေထံမှ Pro ကို Windows 8.1 ကို update လုပ်ဖို့လိုလျှင်, ငါတို့သည် 8.1 update ကိုလျှောက်ထားပြီးတော့ Windows 8.1 ကို Pro ကိုသွားဖို့ Windows 8.1 Pro ကို Pack ကိုဝယ်ယူအကြံပြုပါသည်။
နယူး Laptop များနှင့် Tablet Up ကိုချိန်ညှိခြင်း5ခြေလှမ်းများ
သင့်ရဲ့ Windows7ကိုကုန်ပစ္စည်း Key ကိုရှာပါဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ Windows XP ကိုကုန်ပစ္စည်း Key ကိုပြောင်းခြင်းအဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်အဆင့်
ဘယ်လိုလျော်ဖျက်ပစ်ပါနှင့်ပြန်လည် install ပြုလုပ် Windows ကိုမှ
သူများသည်အခမဲ့ Microsoft ကကုန်ပစ္စည်းသော့ချက်များရီးရဲလ်ဖြစ်ပါသလား
တစ်ဦး PCI Adapater ကတ် Installing
အဘယ်သို့ငါတစ်ခက် Drive ကိုအစားထိုးပါသလား?
Microsoft Windows နဲ့ကုန်ပစ္စည်းသော့ချက်များကိုရှာပါရန်မည်သို့
Windows XP ကို ​​Install ကိုရှင်းလင်းနည်း
Amp (Accelerated မိုဘိုင်းစာမျက်နှာများ) Web ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကဘာလဲ?
အဘယ်အရာကို BRT နည်းလမ်နှင့်လိုက်တဲ့အခါဒါဟာအသုံးပြုနည်း
Microsoft Office နှင့် MacBook Pro နှင့်ရဲ့ Touch ကိုဘား
Updatedb - Linux ကိုစစ်ဌာနချုပ် - Unix စစ်ဌာနချုပ်
ထိပ်တန်းဘလော့များအနေဖြင့် blogging လျှို့ဝှက်ချက်များ
အောက်မှာ $ 800 အတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းကို PC Build
Ipconfig - Windows မှာ Command Line Utility ကို
Windows အတွက် Mail ကိုအတွက်ကော်လံများပြောင်းလဲနည်း
အဆိုပါ7အကောင်းဆုံး Viewfinder ကင်မရာများကို 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
Facebook က Timeline ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဝင်းနိုင်ထွန်း Tek HTP-551 5.1 Channel ကိုနေအိမ်ပြဇာတ်ရုံနာယကပက်ကေ့ - ကုန်ပစ္စည်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကလေးတွေကအဘို့နားကြပ်ကန့်သတ်အကောင်းဆုံး Volume ကို
OS X ကိုအဘို့အဆာဖာရီထဲမှာပုဂ္ဂလိက Browsing ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ITunes ကိုအတူသီချင်းသတင်းအချက်အလက် (ID3 Tags:) ကိုပြောင်းလဲနည်း
ကားတစ်စီးစတီရီယို Amp သူ့ဟာသူတွင်နှင့်ပိတ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့
ကားတစ်စီး Tech မှ
တစ်ဦး ONEPKG ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
Microsoft Office အတွက် Keyboard Shortcuts Create သို့မဟုတ် Reassign
တစ်ဦးသည် Ethernet ကတ်ဆိုတာဘာလဲ
ဂူဂယ်လ်စာရင်းဇယား NOW ကရက်စွဲနှင့်အချိန် Calculator မှာရှိတဲ့ function
Denon နယူး in-စစ်ဌာနချုပ်မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ receiver ကြေညာ
ဘေးထွက်နေဖြင့် PSP နဲ့ PS Vita ဘေးထွက်
ကားများအတွက်မိုဘိုင်း Wi-Fi နိဒါန်း